Automatique marketing mora vidy amin'ny raharaham-barotra habe | Martech Zone
Alahady, May 22, 2011 Alarobia, Oktobra 2, 2013 Douglas Karr
Marketing Automation no anarana nomena an'ireo sehatra rindrambaiko natao ho an'ny departemanta marketing sy fikambanana hanamorana ny fizotrany amin'ny alàlan'ny fanetsehana ireo asa miverimberina. Iray amin'ireo asa ireo ny fahaizana mamantatra mpitsidika amin'ny tranokalanao, misambotra ny mombamomba azy ireo ary mamolavola paikady fifampiresahana mitohy amin'izy ireo… tanterahina miaraka amin'ny loharanom-pahalalana kely na tsy misy amin'ny alàlan'ny mandeha ho azy.
Araka ny Vondrona Aberdeen, orinasa manaparitaka rafitra automatique marketing:
Manana taham-panovana firaka 107% tsara kokoa.
Manana 40% haben'ny fifanarahana antonony lehibe kokoa.
Manana ekipa 20% ambony quota.
Mahazo 17% ny mari-pahaizana marina kokoa.
Hatramin'izao, ny fampiharana automatisation marketing dia sarotra loatra na lafo loatra loatra ho an'ny orinasa antonony. Miova izany. Act-On dia karazana lozisialy automatique marketing automatique namboarina mba hampiharina amin'ny orinasa kely indrindra, na lehibe indrindra aza. Miaraka amin'ny vidiny izay ~ $ 500 isam-bolana (tsy misy fifanarahana maharitra)… mora ihany koa ny mampihatra an'io vahaolana feno io.
Mba hahombiazana anio, ny mpivarotra dia mila mampifantoka ny fomba fiasa fototra avy amin'ny famoahana fotsiny firaka mitarika mankany amin'ny fiaraha-miasa am-barotra miaraka amin'ny varotra hitarika fidiram-bola, "hoy ny tatitra nataon'i Raghu Raghavan, mpanorina sy CEO an'ny Act-On. “Ny fitambaran'ny Act-On amin'ny fahatsorana sy ny fahefana dia manome rohy tsy hita eo amin'ny tsena eo anelanelan'ny vahaolana tsy mitovy toa ny mailaka sy tranonkala Analytics sehatra, ary sehatra fanamoriana automatique marketing mihoatra loatra.
Ny Act-On Software dia manana safidy be dia be… misy amin'ny sehatra tokana:
Marketing amin'ny mailaka miaraka amin'ny fitantanana lisitra sy fampielezana marketing drip
Ireo endrika Internet sy pejy fandraisana
Syndication atiny orinasa
Fanaraha-maso ny mpitsidika tranonkala
Webinar sy fitantanana hetsika (amin'ny alàlan'ny fampidirana amin'ny WebEx)
Fampidirana CRM (miaraka amina fampidirana Salesforce tsy misy seam)
Fitaovam-barotra amin'ny haino aman-jery sosialy sy fitaovana fanomanana
Prospect profiling, segmentation, qualification, scoring ary analytics
Act-On Manome anao mpanampy mpanolo-tsaina manokana ihany koa nefa tsy andoavany vola! Matetika io dia upsell ho an'ny mpivarotra automatisation marketing. Ny fampidirana henjana an'i Act-On miaraka amin'ny Webex, Jigsaw ary Salesforce afaka manome ny ezaka marketing anao amin'ny làlana feno - manomboka amin'ny vinavina, hatrany amin'ny pejy fandraisana, amin'ny demo, amin'ny fikolokoloana, hitarika taranaka, hanidy… nefa tsy mila miala amin'ilay rindrambaiko mihitsy. Rafitra matanjaka io.
Tags: Fanamarinana ny marikatsoratadidy sosialy
Lisitry ny lohahevitra amin'ny mailaka Teny izay miteraka sivana Spam
May 23, 2011 ao amin'ny 1: 00 PM
Salama Douglas, ahoana no ampitahanao ny Act-On amin'ny HubSpot? Vahaolana SAAS ve izany sa mila apetrakao amin'ny mpizara Internet anao? Raha SAAS io, misy eritreritra momba ny serivisy ho an'ny mpanjifa?
Miarahaba anao indrindra, John McTigue
May 23, 2011 ao amin'ny 3: 19 PM
Somary matanjaka kokoa noho Hubspot ity. Tsy mieritreritra an'i Hubspot ho toy ny sehatra automatique marketing toy ny fampiharana marketing ao anaty aho. Azoko atao ny miala - fa tsy mieritreritra aho fa ny CRM, fampielezana drip, sns. Dia ampahany amin'ny fampiharana Hubspot.
May 23, 2011 ao amin'ny 3: 27 PM
Ny HubSpot dia manana fikolokoloana (mitete) ary mitarika fidirana API miaraka amin'ny Salesforce sy CRM hafa, ny fananganana pejy sy ny fanatsarana ny pejy, ny fitaovana SEO (na dia somary primitive aza), CMS ho an'ny tranokala sy motera bilaogy tafiditra. Toa sahala amin'ny suite automatique marketing miorina tsara be izany amiko. Izy ireo aza dia manana built-in marketing e-mail.
Tsara indrindra, John
May 23, 2011 ao amin'ny 9: 43 PM
Fantatro tsara amin'ireo fitaovana roa ireo; tena tonga amin'ilay zavatra ezahinao hatao - dia ny fifantohana voalohany amin'ny fidirana anatiny, avy eo hubspot dia mety hojerena, na farafaharatsiny fampiasa an'io tranokala seo 'malalaka' io; raha ny fahitana fahombiazana bebe kokoa amin'ny fanentanana ivelany sy / anatiny ary ny fanamorana ny fitantanana ny fampielezan-kevitrao sy ny fitaovana miaraka dia ny fifantohana - toy ny webex, salesforce.com, jigsaw ary maro hafa, dia mety mifanaraka tsara amin'izay ny Act-on. Nomena indrindra ny fomba mora ataon'ny Act-On amin'ny fanombohana / fampiasana ary ny fifantohany amin'ny fandefasana mailaka.
May 27, 2011 amin'ny 6: 03 AM
Ny famoronana rindrambaiko na rafitra fifanakalozana varotra, Ahoana no ahalalako fa mahazo ny sandan'ny rindrambaiko / rafitra tsara indrindra aho.
May 27, 2011 ao amin'ny 4: 34 PM
1 Jun 2011 amin'ny 3:57 AM
Iray amin'ireo bilaogy lehibe novakiako androany. Ahitana fampahalalana tsara be dia be ny tranokalanao ary azoko antoka fa olona maro no ho tia azy toa ahy. Te hanome isa naoty ny ankohonana amin'ity tranonkala ity aho. Tohizo fa tsara ry zalahy. Mieritreritra aho fa hiverina ato amin'ity tranonkala ity matetika. Misaotra.